Diyaaradda Air Djibouti oo caawa laga jiiday Run-wayga Garoonka Garoowe – AfmoNews
Diyaaradda Air Djibouti oo caawa laga jiiday Run-wayga Garoonka Garoowe
Diyaaradan oo ay leedahay Shirkadda Diyaaradaha ee Air Djibouti ayaa Arbacadii ku dhacday dhabaha ay diyaaradaha ku cararaan, ka dib markii ay u bixi waayeen lugaha dambe.
Diyaaradda oo rakaab ka qaaday Magaalada Hargeysa ayuu safarkeeda ku wajahnaa Magaalada Garoowe, waxaana la socday 39 rakaab iyo 5 shaqaale, mana jirto cid wax ku noqotay shilkaasi.
Diyaaradan oo nooceedu uu yahay Boeing 737-500 ayaa tan iyo Arbacadii taalay bartamaha Garoonka General Maxamed Abshir, taasoo hakisay hawlihii duulimaadyada ee garoonkaasi.
Wixii ka dambeeyay Arbacdii ayaa waxaan jirin wax duulimaadyo ah oo tagay Magaalada Garoowe, sababo ku aadan garoonkaasi oo aan lahayn taagga diyaaradaha looga jiido dhabaha garoonka, marka ay ku dhacaan iyo garoonka oo leh hal Run-way oo keliya.
Waxaa caawa lagu guuleystay in wiishash is biirsaday diyaaradda looga jiido dhabaha ay diyaaradaha ku cararaan, iyadoona loo jiiday meel gees ka ah garoonka, illaa iyo inta laga cilad bixinayo diyaaradaasi.
Agaasimaha Shirkadda Diyaaradaha ee Air Djibouti, Cabdiraxmaan Cali Cabdullaahi ayaa 2-dii bishan sheegay inaanay jirin wax cilad ah oo diyaaraddu qabto, marka laga soo taggo labada lugood ee dambe, oo sida uu sheegay qarxay.
Agaasimaha ayaa xusay in taayaro ay gayn doonaan Magaalada Garoowe, si ay dib ugu hawlgasho diyaaradooda.
Si kastaba ha-ahaatee laga bilaabo berrito duulimaadyadii taggi jiray Magaalada Garoowe ayaa la fillayaa in ay u hawlgaan.